Imvelaphi yasimahla ekujongeni kwi-Intanethi: Uyenza njani uPhando lweeRekhodi zoLuntu - Ezintsha
Eyona Ezintsha Uyenza njani iMvelaphi yokuSimahla Jonga kwi-Intanethi
Ungumnini wamashishini amancinci uhlola abasebenzi abatsha. Uya kumhla weTinder kwaye ufuna ukunqanda ukubanjiswa. Ufumana umntu omtsha ohlala naye egumbini, kwaye ufuna ukukhangela ukuba ayinguye umntu obulala indoda ngaphambi kokuba ungene.
Zininzi izizathu zokuqhuba ukujonga imvelaphi komnye umntu.
Unokukhetha nokuzenzela ngokwakho ngaphambi kokuba uye kudliwanondlebe nomsebenzi ukuze ubophe naziphi na iziphelo ezikhululekileyo okanye iifoto ezinxilileyo ezijikeleza i-intanethi. Kuhlala kulungile ukwazi ukuba abanye banokufumana ntoni ngawe ngonqakrazo olumbalwa.
Ke uyifumana njani i isheke sasimahla esikwi-Intanethi ?
Apha sijonga indlela yokufumana isiseko sokujonga simahla kwi-intanethi, kunye nokuphonononga ukuhlawula okungabizi mali kutshekisha imvelaphi engena kwiinkcukacha ezithe kratya. Masifikelele kuyo!
Ngaba ungayiqhuba ngokwenyani imvelaphi yokuSimahla?
Ngokuqinisekileyo unokufikelela kwimvelaphi yokujonga iinkonzo simahla, kodwa kuya kuba buhlungu esileni, kudle ixesha, kwaye kungachaneki kancinci. Ihlala ifuna ukugqitha kwiirekhodi zikawonke-wonke kunye neerekhodi zenkundla zikarhulumente okanye ukwenza uphando olunzulu lukaGoogle.
Ukuba uyazi ulwazi oluninzi ngemvelaphi malunga nomntu omjongileyo, ke ukufikelela kwiirekhodi zabo kulula.
Nangona kunjalo, ukuba unolwazi olulinganiselweyo lwangemvelaphi ukuze uhambe, uya kulwa. Kuba iirekhodi zikarhulumente zikhona ziququzelelwe kwinqanaba likarhulumente / kwisithili / kwisixeko , Kuya kufuneka wazi ezona ndawo bahlala kuzo kunye / okanye babanjwe ukuba uthembele kwiirekhodi zikarhulumente kunye neenkundla.
Kule nqaku, siza kuxoxa ngeendlela zokujonga imvelaphi yasimahla ezikhoyo. Kodwa ukuba ufuna ukugcina ixesha kunye nobunzima, jonga ngasemva iinkonzo ezinje InyanisoFinder kufuna ulwazi oluncinci kakhulu ukufumana iziphumo ezichanekileyo ngokukhawuleza.
Ukulandela uMthetho, ukuba Ungumqeshi, Umnini-mhlaba, okanye i-Inshurensi
Ukuba wenza imvelaphi yokujonga umntu njengomqeshi, umnini-mhlaba, okanye ityala, ezonyango, okanye izizathu zeinshurensi, kuya kufuneka uthobele UMthetho weNgxelo oLungileyo weNgxelo .
Umthetho weNgxelo yeNtengo ngeNtengo uthi kufuneka usebenzise igosa I-Arhente yokuXela abaXhasi (i-CRA) ukuqhuba ukujonga ikhredithi kumqeshwa / umqeshi wakho, njlnjl. I-Arhente yokuXela abaThengi igcina imigangatho yezomthetho yokhuseleko lwedatha kunye nokusonjululwa kwempikiswano.
Qiniseka ukuba ulandela umthetho xa uzama ukufumana ingxelo yomntu ngetyala!
I-100% yeNdlela yokuSimahla yokuKhangela
Izinto zokuqala kuqala, jikela kuGoogle.
Ngelixa ukugoagling igama lomntu kungasoloko kuza kuvela iziphumo, kusakulungile ukuzama. Ngokuqhelekileyo igama lomntu, kuya kuba nzima ngakumbi ukufumana naziphi na iziphumo ezivela kuGoogle.
Ukuba abasebenzi bakho abanokubizwa ngokuba nguJohn Smith noSally Jones, ngekhe ubabone.
Nangona kunjalo, ungazama ezi ndlela:
Phendla igama lomntu lowo + igama lesixeko / ilizwe labo.
Khangela amagama abo kwimifanekiso kaGoogle ukubona ukuba ungayifumana ifoto yabo oyaziyo.
Jonga iGoogle News tab ukubona ukuba khankanyiwe ezindabeni.
Jonga iithebhu zikaGoogle iividiyo kwimeko apho.
Ukuncamathisela igama lomntu kwiinjini yokukhangela yeyona mvelaphi ilula yokujonga kwi-intanethi. Kodwa iinjini zokukhangela akunakulindeleka ukuba zibuyise iziphumo ozifunayo ngaphandle kokuba ube nethamsanqa okanye ufumane umntu onegama elingaziwayo.
Emva koko, qalisa ukujonga iinethiwekhi zentlalo. Ukuba iinjini zokukhangela zisilele kuwe, iisayithi zonxibelelwano zinokukunceda ukukhangela ngokuthe ngqo. Chwetheza igama lomntu kunye nelokugqibela kwiisayithi zokunxibelelana ukuze ubone ukuba akukho buso ubaziyo.
Iindawo zenethiwekhi yokunxibelelana ukuzama ukubandakanya:
Uninzi lwabantu lubeka isixeko sabo, igama elipheleleyo, kunye nomhla wabo wokuzalwa kwiiprofayili zabo zentlalo, ngakumbi kwiindawo ezifana ne-Facebook. Olu phendlo lunokwenza kube lula ukunciphisa abantu abanamagama afanayo kwindawo efanelekileyo kunye nobudala.
Okwangoku, abantu abaninzi bayaxoka kwimithombo yeendaba zentlalo, banezicwangciso zabucala ezingqongqo, okanye ungazisebenzisi nje… zinjalo ezi zinto zisetshiwe lilinganiselwe.
Iindawo ezinje ngePeekYou
Kukho ezinye iiwebhusayithi ezinje Ukukhuphela ezibonisa isishwankathelo simahla somsebenzi womntu okwi-intanethi ngokuchwetheza igama lakhe lokuqala, igama lakhe kunye nendawo ahlala kuyo.
Ngelixa oku kuyiteknoloji itshekhi yangasemva yasimahla , Olu khangelo alungeni nzulu kunakwimithombo yeendaba ezisisiseko sentlalo kunye nobukho kwi-Intanethi. Awuyi kufumana iirekhodi zokubanjwa okanye imbali yolwaphulo-mthetho njl.
Ukuba ufuna into embe nzulu kunokwenza umsebenzi olula we-Intanethi, iisayithi ezinje InyanisoFinder kwaye Intelius Unokuzisa imbali yolwaphulo-mthetho, iinombolo zomnxeba, imbali yedilesi, iirekhodi zokuqhuba, kunye nolunye ulwazi lomntu ngesixa esincinci.
UMabhalane weeNkundla zeeNkundla
Ukuba unoluvo olulungileyo lokuba umntu wakho uhlala phi okanye wayehlala phi ngaphambili, unokujonga ulwazi lwerekhodi loluntu kwi-intanethi.
Vula uGoogle kwaye ukhangele: [State] + unobhala wenkundla weerekhodi zenkundla.
Nje ukuba ufumane iwebhusayithi efanelekileyo yaseburhulumenteni, kuya kufuneka ukwazi ukukhangela ulwazi olufumanekayo esidlangalaleni malunga nalo mntu. Nangona ihlala ihleli, kwaye awuyi kufumana ingxelo eneenkcukacha.
Kwakhona, khumbula ukuba ukuba umntu uye wafuduka phakathi kwamazwe ahlukeneyo kunye nezixeko, kuyakufuneka wenze oku kwindawo nganye abahlala kuyo. Olu lwazi lurekhodi loluntu, kodwa bagcina kuphela iirekhodi zezinto ezenzekileyo kuzo isixeko esithile / isiphaluka / ilizwe.
Ukuba ukrokrela ukuba umntu unemvelaphi yolwaphulo-mthetho, emva koko ungenza isiseko solwaphulo-mthetho esisiseko ngokujonga iirekhodi zikarhulumente zentolongo zeendawo ahlala kuzo.
Vula uGoogle kwaye ukhangele: [Xela] + izilungiso kwibanjwa
Ngoku fumana iwebhusayithi esemthethweni yejele elikhangela kwiziphumo. Nje ukuba ufumene i-portal esemthethweni, faka igama lomntu, igama lokugqibela, kunye nesixeko. Oku kukuvumela ukuba ubone iirekhodi zolwaphulo-mthetho kunye nolwazi olusisiseko ngemvelaphi yolwaphulo-mthetho, kodwa amanye amazwe abiza intlawulo yoku, kwaye ngamanye amaxesha kukho ukungangqinelani.
Kananjalo kuya kufuneka uyenzele le nto LONKE ULAWULO ukuba umntu ebehlala okanye etyelele, ejonga irekhodi lolwaphulo-mthetho kuye ngamnye.
Ukuba ufuna ukukhangela iirekhodi zolwaphulo-mthetho kuzo zonke iindawo ezingama-50 ngaphandle kokuhlawuliswa imali eyongezelelweyo, iinkonzo ezinje Intelius kwaye Ukujonga kwangoko Unokwenza irekhodi lase-US ngokubanzi lokujonga irekhodi ngentlawulo encinci. Uninzi luza nesilingo esinexabiso eliphantsi!
Ingxelo yonyaka yeKhredithi (ngokwakho)
Ukuba ufuna ukujonga amanqaku akho etyala ngaphambi kokufaka isicelo semali mboleko, imali, okanye ukuqeshisa, uya kuba nakho ukwenza njalo kube kanye ngonyaka simahla.
Qiniseka ukuba inkcitho yekhadi lakho letyala ayikukufikisi emanzini ashushu!
Amaziko amathathu amatyala- I-Equifax, amava, kwaye Inguqu -Zonke ziyafunwa ngumthetho ukuba zikunike itshekhi yasimahla kwaye unike ingxelo ngokwakho kanye ngonyaka.
Ukuba ufuna ukukhangela ngaphezulu kunoko, kuya kufuneka uhlawule ilungelo. Yiba nengqiqo ngekhadi lakho lekhredithi!
Ezona nkonzo ziNgcono ngokuKhangela ngeTyala elinexabiso eliphantsi
Kulungile, iinkonzo zasimahla zokujonga imvelaphi kunzima ukuza. Ukutshekisha imvelaphi simahla kufuna ukuba ukhangele kwiindawo ezininzi kunye neekhawunti, kunye nezixeko ukufumana iirekhodi zoluntu lomntu omfunayo. Nangona kunjalo, kunokuba nzima ukwazi ukuba umfumene umntu olungileyo.
Ngokusisiseko, ukukhangelwa kwemvelaphi yasimahla kwi-Intanethi akulunganga kakhulu.
Nangona kunjalo, aba baboneleli beenkonzo zokutshekisha babiza imali encinci. Kwaye uninzi luza novavanyo olungenaxabiso, ukuze ukhangele kwaye ufumane zonke iirekhodi zolwaphulo-mthetho kunye neerekhodi zoluntu ozifunayo ngaphandle kokuthatha usuku lonke. Singacebisa ukuba unike enye Eyona nkonzo ilungileyo yokujonga imeko yangasemva kwi-Intanethi itrayi!
1. InyanisoFinder -Iyona nkonzo iJonga ngokuKhangela ngokuBanzi
Ixabiso: $ 27.78 ngenyanga (iitshekhi zangasemva ezingenasiphelo)
Mhlawumbi eyona ndawo ithandwayo yokujonga inkonzo kwi-Intanethi, i-TruthFinder ikuvumela ukuba wenze uhlolo lwangasemva olungenamkhawulo xa sele ubhalisele ubulungu babo benyanga. Ubulungu babo buxabisa i- $ 27.78 ngenyanga, nangona ungabaleka ukujonga okungapheliyo kwemvelaphi kubantu xa sele unamalungu.
Zininzi iiparameter zokukhangela kumfumani wenyaniso, ke kulula ukukhangela abantu onolwazi oluncinci lwemvelaphi. Ngokubanzi, le nkonzo yokujonga imvelaphi ichanekile kwaye inokubuyisa ngokulula ulwazi lobuqu njenge:
Iinkcukacha zemidiya yoluntu
Ulwazi lobunini bepropathi
Imvelaphi yakho yemfundo
Abantu onokuba kunye nabo, abahlobo kunye namalungu osapho
Ulwazi lwamva nje lokunxibelelana
InyanisoFinder iyafumaneka kwi iselfowuni Kunye nePC, ukuze uqhubeke nokujonga ngasemva xa usenza imfuneko! Inkonzo icacisa gca ukuba lonke ulwazi olunikezelwe kuwe lungasetyenziswa njani ngokusemthethweni, ke ukuba ungumnini-mhlaba okanye umqeshi oqhuba imvelaphi, uya kuyazi into ehambelana noMthetho weNgxelo oLungileyo weNgxelo.
Kwicala elisezantsi, i-TruthFinder ifuna ukuba ube nobulungu ukuze usebenze ngasemva, kwaye kuya kufuneka uhlawule ngaphezulu kwe- $ 2 ukuba ufuna ukukhuphela iPDF yayo nayiphi na ingxelo yomntu. Kukho ugxininiso olungaqhelekanga kwii-horoscopes, kwaye bavuthela ezinye izinto ngendlela engalinganiyo. Okwangoku, imalunga nenkonzo yokujonga imvelaphi efanelekileyo kwi-intanethi.
Ngaba i-TrueFinder ibonelela ngovavanyo lwasimahla?
Hayi, Inyaniso ayibonisi xesha lokuvavanywa. Nangona kunjalo, ubulungu ziindleko kuphela $ 27.78 ngenyanga , ngezaphulelo ukuba uthenga ubulungu beenyanga ezininzi ngaxeshanye. Kwaye, wakube uneakhawunti, ungabaleka ukujonga okungapheliyo kwemvelaphi ebantwini.
Ngaba i-TrueFinder Legit?
Ewe, InyanisoFinder isemthethweni. Ulwazi malunga nenkonzo yokujonga imvelaphi ihlala ichanekile, kwaye inkonzo iyakuxelela nokuba yintoni onokuyenza kwaye awukwazi ukuyenza ngolwazi olo ngokusemthethweni. Oku kunceda abanini mhlaba kunye nabaqeshi ukusebenzisa le datha ngokuhambelana neFCRA.
Mbini. Intelius Indawo ekuMgangatho oPhezulu yokuKhangela amaShishini (Uvavanyo lweentsuku ezi-5)
Ixabiso: $ 22.86 ngenyanga (ukukhangela okungenamda)
Uvavanyo: Uvavanyo lwe- $ 1.99 kangangeentsuku ezintlanu
I-Intelius yindawo yokukhangela yabantu ekuvumela ukuba uqokelele idatha kwiirekhodi zikarhulumente kunye neenkampani zabucala ukupeyinta umfanekiso womntu omjongileyo. Ubeka igama labo nendawo yabo; emva koko uya kucelwa imibuzo embalwa yokulandela ukuze uzame ukunciphisa ukukhangela.
Njengakwi-TruthFinder, kuya kufuneka ubhalisele ubulungu ukuze ubone iziphumo ezizeleyo. Nge $ 22.86 ngenyanga, ungonwabela ukujonga okungapheliyo kwemvelaphi , entle. Eyasungulwa ngo-2003, i-Intelius ligama elithembekileyo xa kuziwa kwiinkonzo zokujonga imvelaphi, ukuqokelela idatha kuquka:
Ukusuka kwidatha yengqesho kulwazi olufumaneka esidlangalaleni, i-Intelius ikuvumela ukuba upeyinte umfanekiso ochanekileyo womntu oqhuba imvelaphi ngaphandle kokukhangela kwiwebhusayithi zikarhulumente kangangeeyure. Ulwazi lufunyenwe kwi- I-FBI, iirekhodi zenkundla, ukufakwa komthetho, izenzo zokuthengiswa kwezindlu, iinethiwekhi zentlalo, kunye neminye imithombo eyahlukeneyo.
Kwelinye icala, kufuneka uhlawule ubulungu, kwaye i-Intelius ASIYO i-CRA-ke abanini-ndawo kunye nabaqeshi abanakho ukusebenzisa ngokusemthethweni olu lwazi ukwenza izigqibo malunga nabasebenzi okanye abaqeshi abanokubakho. Iwebhsayithi inokuba kukucofa kancinci, ichaze ulwazi njenge-POTENTIALLY GRAPHIC ukwenza ukuba ucofe ngakumbi.
Ngaba i-Intelius inikezela ukulingwa mahala?
Ewe okwangoku, kukho uvavanyo lweentsuku ezi-5 olufumanekayo nge- $ 1.99, emva koko kuyakufuneka ubhalise njengelungu le-Intelius ukuze uqhubeke nokusebenzisa inkonzo yabo. Ubulungu buqala nge $ 22.86 ngenyanga , ngezaphulelo ukuba uthenga ubulungu beenyanga ezininzi ngaxeshanye. Nje ukuba ulilungu le-Intelius, unokwenza uhlolo olungenasiphelo kubantu baseMelika.
Ngaba i-Intelius Legit?
Ewe i-Intelius isemthethweni, ivumela abasebenzisi ukuba bakhangele ulwazi malunga neerekhodi zokubanjwa, iirekhodi zedolophu, imbali yengqesho, ubukho kwi-Intanethi, nokunye okuninzi. Nangona ukukhangela okungasemva kwe-Intelius kuhlala kuchanekile, inkonzo injalo ayisiyi-CRA eqinisekisiweyo , Abanini-mhlaba kunye nabaqeshi abanakho ukusebenzisa i-Intelius ekuvavanyeni abasebenzi abanokubakho okanye abaqeshi.
3. Ukujonga kwangoko Elona Xabiso liMali (Uvavanyo lweentsuku ezi-5)
Ixabiso: $ 34.78 ngenyanga
Uvavanyo: Uvavanyo lwe- $ 1 kangangeentsuku ezintlanu
Njengeyona nkonzo yokujonga imvelaphi ilungileyo, ukujonga kwangoko kusetyenziswa iirekhodi zikarhulumente, iirekhodi zedolophu, imbali yengqesho , kunye nezinye iirekhodi zoluntu nezolwaphulo-mthetho ukubeka ndawonye umfanekiso womntu omfunayo. Zininzi iindlela zokukhangela umntu wakho, kwaye indawo ichaza ukuba ungayisebenzisa njani ngokusemthethweni.
Indawo yokukhangela yangasemva ine-interface entle kunye noyilo. Nangona kunjalo, abantu abaninzi bakhalaze malunga namaxesha okulayisha acothayo, iinkonzo ezingalunganga zabathengi, kunye nokungakwazi ukuthenga ingxelo nganye. Okwangoku, inezinto ezininzi ezinokuqwalaselwa.
Ngaba ukuKhangela kwangoko kunikezela ngeSilingo sasimahla?
Ukuba ujonge ukuqhuba itshekhi yangasemva simahla (kulungile… phantse simahla), kuya kufuneka uthathe ithuba lesilingo esinexabiso eliphantsi esivela kuQeqeshwe kwangoko. Nje ukuba ucelwe ukuba uhlawule le nkonzo, vele ushiye ukuphuma kwakho okwemizuzu embalwa, kwaye kungekudala, uya kunikwa ityala le- $ 1 (ewe, idola elinye) iintsuku ezintlanu.
Awuhlali ufumana itshekhi yangasemva ye- $ 1!
Emva kovavanyo lwe- $ 1 kangangeentsuku ezintlanu, kukho iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo xa ujonga uKujonga kwangoko. Nantsi indlela abachitha ngayo:
Ingxelo yenyanga yobulungu- $ 34.78 ngenyanga
Ingxelo yekota yobulungu- $ 27.82 ngenyanga
Ubulungu bokujonga iifowuni- $ 4.99 ngenyanga
Isibonelelo sovavanyo- $ 1 kwiintsuku ezintlanu
Akunqabile ukufumana unikezelo olunqabileyo lwesilingo seenkonzo zokujonga ngasemva, ke le ndawo inokuba yindlela elungileyo yokubona ukuba loluphi uhlobo lolwazi onokulufumana ngaphandle kokuhlawulela ubulungu benyanga kwangoko.
Ngaba lilungu lokujonga kwangoko lokujonga?
Ewe ukujonga kwangoko kusemthethweni. Indawo izakusebenzisa ulwazi olwahlukeneyo loluntu kunye nemithombo yabucala ukufumana imbali yengqesho, iidilesi, iinombolo zomnxeba, umsebenzi okwi-Intanethi, iirekhodi zokubanjwa, kunye nezinye iindlela ezahlukeneyo.
Nangona kunjalo, abaqeshi kunye nabanini-mhlaba abanakho ukusebenzisa le nkonzo ekufumaneni i-vet abasebenzi kunye nabaqeshi, njengoko u-Instant Checkmate engeyiyo i-CRA esemthethweni.
Yeyiphi eyona mvelaphi isimahla yokujonga indawo?
Ukuba ujonga indawo engqongqo yokujonga indawo yangasemva, ke ulunge ngakumbi ngokwenza iGoogling okanye usebenzisa indawo esisiseko enje ngePeekYou. Nangona kunjalo, indawo yokujonga simahla isimahla inokufikelela kuyo kakhulu Ulwazi olunqunyelweyo, ngenxa yoko iziphumo zakho ziya kuba zeziphakathi.
Endaweni yokujonga indawo simahla, kutheni ungazami iinkonzo ezinqabileyo ezibonelela ngedatha eninzi? Iinkonzo ezinje nge InyanisoFinder vumela ukubaleka ukujonga okungapheliyo kwemvelaphi encinci njenge- $ 22.86 ngenyanga. Ngelixa iisayithi zithanda I-Intelius kunye ne-Instant Checkmate iza novavanyo oluncinci lweentsuku ezi-5, ekuvumela ukuba usebenze kangangoko ukujonga ngasemva njengokuba ungathanda.
Nokuba yeyiphi imvelaphi yokujonga indawo ogqiba ekubeni uyisebenzise, ​​ndiyathemba ukuba uyakufumana okulingeneyo kwiimfuno zakho kwaye usebenzise lonke ulwazi olufumanayo ngokusemthethweni nangokufanelekileyo. Umnqweno omhle!
Abasebenzisi beReddit badale uluhlu olukhulu lokuDlalwayo lweeNgoma eziBachazayo
Isinxibo siBuyela umva: Kuvela iNtsholongwane eNtsha yokuKhanya okuKhanyayo
Iibhodlela eziPhezulu: I-Ballmer Peak iyinyani, uPhononongo luthi
UMichael Cooper uya kwiDesika leNkcubeko yeXesha
kwelona xesha langoku lokungabi nazintloni
umntu osisitabane kumantombazana amdaka
vin yedizili vs iliwa
isityebi sendoda emhlophe ifunxa ilizwe liphela
mangaphi amaxesha angenazintloni akhoyo kwi-Netflix